Tahiry maitso ho an’ny toetr’andro (FVC): famatsiam-bola hiarovana ny tontolo iainana | NewsMada
Tahiry maitso ho an’ny toetr’andro (FVC): famatsiam-bola hiarovana ny tontolo iainana
Mikarakara atrikasa amin’ny ampitain-davitra (visio conference), anio 10 jolay, ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy (Medd). Fivoriana fampahafantarana ny fandaharanasa miompana amin’ny Tahirim­bola maitso ho an’ny toetr’andro (FVC), famatsiam-bola iraisam-pirenena avy any amin’ny firenena mandroso ho an’ny firenena an-dalam-pandrosoana toa antsika, izay marefo tokoa ka iharan’ny fiovan’ny toetr’andro. Mahazo an’ity famatsiam-bola FVC ity i Madagasikara ka mila manana fandaharanasa mifandraika amin’izany.
Entona karbona sy fiovan’ny toetr’andro
Vina manokana ho an’i Madagasikara ny hampidirana ny lafiny fiovan’ny toetr’andro ao anatin’ny drafi-pampandrosoana toekarena, mifanandrify amin’ny FVC amin’ny fampiroboroboana ny fampihenana ny fiparitahan’ny entona karbona (GES) sy ny fahaiza-miatrika ny toetr’andro. Mi­fanojo amin’ny filàn’ny firenena ato anatin’ny fohy sy antenantenan’ezaka rahateo izany.
Tafiditra ao anatin’ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny mpisehatra isan-tsokajiny ity fandaharanasa tanterahin’ny Medd ity, amin’ny alalan’ny Birao nasionaly ho an’ny fiovan’ny toetr’andro, ny karbona ary ny REDD+. Misy ny fiaraha-miombona antoka amin’ny fandaharanasan’ny firenena mikambana ho an’ny tontolo iainana (PNUE).